Taliska qeybta 21aad oo kormeeray xarun ciidanka lagu tababaro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Taliska qeybta 21aad oo kormeeray xarun ciidanka lagu tababaro
Taliska qeybta 21aad oo kormeeray xarun ciidanka lagu tababaro
Taliyaha Qeybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka iyo Sarakiil ka tirsan ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa kormer ku tagaay dugsi lagu tababaro ciidanka oo ku yaala duuledka magalada Cadaado ee Gobalka Galgaduud.
Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciro Taliyaha Qeybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka oo ay wehliyaan saraakiil ka tirsan AMISOM iyo mas’uuliyiin kale ayaa kormeeray Dusiga tababarka ciidanka xoogga ee ku yaala deegaanka Gelinsoor, halkaasi oo ay warbixin kaga dhageysteen saraakiisha ciidamada ee goobtaasi ku sugan.
Taliyaha iyo xubnihii la socday ayaa ujeedka kormeerkoodu la xiriirtay u kuurgelidda ciidamada ku sugan dugsiga tababarka, waxaana ay saraakiisha codsadeen in xarunta dib u dayactir loogu sameeyo, maadaama iminka lagu tababaro ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug.
Taliyaha Qeybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciro ayaa sheegay in dowladda ay wax ka qaban doonto dib u dhiska xarunta oo uu arrintaasi u gudbin doono talisyada ka sareeya, si xarunta loou diyaariyo hanaankii uu lahaa dugsiga tababarka Gaas 11aad.
Previous articleXildhibaanno soo dhaweeyay go’aanka Xukuumadda
Next articleXarun lagu daryeelayo agoonta oo la dhagax dhigay magaalada Kismaayo